Jamie Carragher oo sharraxay sababtii ay Liverpool isaga diidday inuu macallin u noqdo Jose Mourinho – Gool FM
(Liverpool) 29 Mar 2020. Difaacii hore ee Liverpool, Jamie Carragher ayaa sharraxay sababtii ay kooxdiisii hore u dooratay Rafa Benitez xagaagii 2004, iyagoo heli karay Jose Mourinho oo Champions League sanaddaas la qaaday kooxda FC Porto.
Labada macallinba xilligaas kuma aysan lahayn saaxadda kubadda cagta awood sidaas u buuran, marka laga reebo inay guulo ku hooggaamiyeen kooxihii ay markaas hooggaanka u hayeen.
Mourinho ayaa Porto kula guuleystay horyaalka Portugal iyo koobka dalkaas, si la mid ah tartanka horyaallada Yurub, halka Benitez uu markaas labo horyaal oo La Liga ah la qaaday Valencia saddex xilli ciyaareed gudahood.
Mou ayaa markaas kaga cadcaddaa dhiggiisa, balse Carragher oo la hadlayay Sky Sports Football Podcast ayaa sheegay in hab maamulkooda uu ahaa barta ay ku kala doorteen, kuna go’aansadeen inay macallin ka dhigtaan tababaraha Madrid ka soo jeeda.
42-sano jirkaan ayaa sheegay in Gerard Houllier uu shaqada ka tagay, sidoo kalena agaasimihii ciyaaraha ee Rick Parry uu la hadlay Rafa Benitez.
“Isaga (Rick Parry) waxa uu ciyaartoyda u sheegay inay doorashada iyaga leeyihiin, magaca Jose Mourinho ayuuna u sheegay,” ayuu Carragher xaqiijiyay.
“Aniga wax badan ayaan ka aqaannay Rafa Benitez sabab la xiriirta kubadda cagta Spain iyo wixii uu sameeyay, waxaan u arkay in magacaabistiisa xoogaa aysan sahlaneyn.
“Balse waxaan dareemayay in Jose Mourinho uusan noqon karin macallinka Liverpool, sabab la xiriirta habka uu dhaqmo.” ayuu tibaaxay difaacii hore ee Liverpool.
Benitez ayaa guulo ku hoggaamiyay naadiga Reds, inkastoo wax horyaal ah uusan la qaadin, haddana koobka horyaallada Yurub ee Champions League ayuu mar kula guuleystay, marna uu la gaaraay final-ka, si la mid ah FA Cup iyo UEFA Super Cup ayuu ku hoggaamiyay kooxda ka dhisan garoonka Anfield.
Taas beddelkeeda, Mourinho ayaanan marna kula guuleysan Chelsea koob Yurub ah, balse waxa uu guulo waa weyn ka soo hoyay gudaha Ingiriiska, isagoo saddex jeer Blues ku hoggaamiyay horyaalka Premier League.
Rio Ferdinand oo ka dhawaajiyay hadal ka careysiiyay Jamaahiirta Kooxda Liverpool... (Muxuu yiri?)